Reuzel - Scrub Shampoo | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - Scrub Shampoo
Regular price MMK 51,000
Normal Size (350ml) - MMK 51,000 MMK Big Size (1000ml) - MMK 129,000 MMK
အမျိုးအစား: ဆေးကြောအားကောင်း Scrub ခေါင်းလျှော်ရည်
--Deep Cleansing | Exfoliate--
သင်ဟာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိတတ်သူ သို့မဟုတ် ဦးရေပြားအဆီထွက်တတ်သူဖြစ်ပါသလား??
ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဆံပင်ထဲမှာရှိနေတတ်တဲ့ အဆီ၊ ဖုန်၊ သဲများနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဆေးကြောအားကောင်း Reuzel - Scrub Shampoo ကို အသုံးပြုပေးလိုက်ပါ။
အခြားပုံမှန် Scrub အစေ့များနှင့်မတူပဲ သဘာဝ Cornstarch ပြောင်းမှုန့် အပေါ် အခြေခံထားသော Scrub Powder များက သင့်ဆံပင်ထဲရှိ အညစ်အကျေးများကို စုပ်ယူဆေးကြော Deep Cleansing လုပ်ပေးသွားပြီး၊ ဦးရေပြားအပေါ် နူးညံ့စွာပွတ်တိုက်ပေးမှုကြောင့်လည်း သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေကာ သင့်ဆံပင်ပျော့ပြောင်း သန်စွမ်းမှုကိုပေးစွမ်း၍ ဦးရေပြားကို အသစ်တဖန်ပြန်လည် နိုးထစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reuzel ရဲ့ Signature Key Ingredients ဖြစ်တဲ့ T-4 Tonic Blend တွင်ပါဝင်သော သဘာဝ Witch Hazel Extract, Nettle Leaf Extract, Rosemary Extract, Horsetail Root Extract အစရှိသည်တို့က သင့်ဆံသားနှင့် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး၊ လိုအပ်သော အစိုဓာတ်များကိုဖြည့်တင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reuzel - Scrub Shampoo ကို Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြပါတယ်။
သဘာဝ Cornstarch-Based Scrub Powder များပါဝင်ခြင်း
ဆံပင်ထဲရှိ အညစ်အကျေးများကို စုပ်ယူဆေးကြော Deep Cleansing လုပ်ပေးခြင်း
Oil-Based Products များကိုပြန်လည်ဆေးကြောရာ အဆင့်သုံးဆင့်၌ ဒုတိယအဆင့်တွင်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်
Peppermint ပူရှိန်းရေမွှေးရနံ့ဖြင့် အားပြည့်၊ လန်းဆန်းစေခြင်း
Reuzel - Scrub Shampoo smells amazing, and feels gritty in your fingers. It hasaunique combination of cleansing and scrubbing agents which helps you in maintainingahealthy scalp while deep-cleansing your hair from dirt, pollutants, chlorine and oil build-ups while leaving your hair withaclean start.
For the heavy product users who stylesalot and shampoosalittle, natural cornstarch derived scrubbing agents will help to break down the grease and helps with the wash out and exfoliating your scalp.
Reuzel's Signature T4 Tonic Blend of Witch Hazel, Nettle Leaf, Rosemary and Horsetail Root makes this shampoo ideal for all hair types and frequent use.
Hey, you’reanew man with this scalp cleansing shampoo.
Includes natural cornstarch derived scrubbing agent
2nd step in the 3-steps method of Oil-Based Products degreasing
Refreshing Peppermint Cologne Scent
From MMK 23,000